ANKADIKELY ILAFY : Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza
Mahazo vahana hatrany eto an-drenivohitra ireo mpitondra moto mandeha mafy tsy manaja ny hafainganam-pandeha izay mahatonga ny lozam-pifamoivoizana matetika. 21 février 2020
Toy ilay tranga teny Andobotany, Kaominina Ankadikely Ilafy, omaly alakamisy maraina dia “ moto scooter” nandeha mafy no nifaoka tovolahy iray nandeha an-tongotra. Vokany, naratra mafy teo amin’ny faritry ny lohany ary koa ny vatan’ ity tovolahy voadona.
Avy hatrany dia nirifatra nitsoaka kosa ilay nandona teo noho eo ihany anefa. Nisy moto iray ihany koa moa voadonan’ity farany tamin’io fotoana io saingy tsy naninona ilay mpitondra moto na dia nisy aza ny fianjerana. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana any an-toerana moa ny fisahanana ny raharaha taorian’io, noentina tany amin’ny tobim-pahasalamana ilay naratra.